रिया पक्राउ परेपछि रियाले लगाएको टिसर्ट अभियानले बलिउडमै यस्तो तरङ्ग! – PathivaraOnline
Home > समाचार > रिया पक्राउ परेपछि रियाले लगाएको टिसर्ट अभियानले बलिउडमै यस्तो तरङ्ग!
admin September 9, 2020 समाचार	0
एजेन्सी । सुशान्तसिंह राजपुत घटनामा उनकी प्रेमिका भनिएकी नायीका रिया चक्रवर्ती पक्राउ परेपछि फेरी एक पटक बलिउडमा हलचल भएको छ । उनलाई १४ दिनको लागि न्यायिक हिरासतमा राखिएको छ । उनलाई एनसीबीको टोलीले मंगलवार पक्राउ गरेको हो । ड्र ग्स सम्बन्धी गतिविधि देखिएपछि उनीमाथि छानविन भएको छ । रियालाई पक्राउ गरेपछि अहिले बलिउडमा तरंग उत्पन्न भएको छ । केही कलाकार उनको समर्थनमा देखिएका छन् । रियालाई न्याय र पितृ सत्तालाई तो डौं भन्ने अभियान सुरु गर्दै कलाकारहरु उत्रिएका हुन्।
मंगलवार रियालाई पक्राउ गर्दा उनले लगाएको लुगालाई लिएर पनि चर्चा भएको छ । उनले लगाएको टिसर्टमा आउनुस् हामी ‘सबै मिलेर पितृसत्ताको यो जरालाई मेटाउ’ भन्ने शब्द अंग्रेजिमा लेखिएको छ । पक्राउ गर्दा उनले लगाएको टिसर्टले पनि चर्चा पाएको हो । रियालाई गरिएको पक्राउलाई कलाकारहरुले पितृ सत्तासँग जोडेका छन् । जसमा कलाकारहरुले पनि समर्थन जनाउँदै पक्राउको विरोध गरेका छन्।
अनुराग कश्यप, सोनम कपूर, विद्या बालन, फरहान अख्तर, अमृता अरोड़ा, दिया मिर्जा, शिबानी दांडेकर, अंगद बेदी, राधिका मदन, श्वेता बच्चनजस्ता कलाकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत रियाको पक्षमा अभियान सुरु गरेका छन् । तर सुशान्तका समर्थनले भने रियाको पक्राउलाई लिएर समर्थन पनि गरेका छन् । सुशान्तलाई न्याय दिनुपर्ने माग राख्नेहरुले घटनाको समर्थन गरेका हुन् ।
छोटो समयमा नै चर्चा बटुलेका थिए ४२ बर्षिय छेतन!